एउटै मान्छे : श्रीमतीको पनि बाबा, छोराछोरीको पनि बाबा ! – PathivaraOnline
Home > समाज > एउटै मान्छे : श्रीमतीको पनि बाबा, छोराछोरीको पनि बाबा !
admin January 5, 2019 समाज 0
‘बाबा हजुरको कपडा कति फोहोर, अर्को चेन्ज गरेर अफिस जानुस् न’ भात खाएर निस्कन लागेका काकालाई काकीले भनिन् ।काकासँगै स्कुल जान लागेकी सानी छोरीको पेन्सिल हराएछ । छोरीले भनिन्, ‘बाबा त्यहाँ पसलमा पेन्सिल किन्नुपर्छ है ?’काकालाई काकीले पनि बाबा भनिन्, छोरीले पनि ! वास्तवमा काका छोरीको बाबा हुन् कि काकीको ? काका र छोरी हिँडेपछि मैले काकीलाई सोधेँ, ‘काकी ल भन्नुहोस् काका तपाईँको बाबा कि छोरीको ?’
काकी एकछिन अकमकाइन् । अनि उल्टै मलाई प्रश्न गरिन्, ‘ल तिमी नै भन न त, काकालाई मैले के भनेर बोलाउने ?’काकाको नाम समुद्र, काकीको नाम सरला । काकाले काकीलाई सरला भनेर बोलाउँछन् । ‘त्यसो भए तपाईँले पनि समुद्र भनेर बोलाउँदा के होला ?’काकीलाई मैले उपाय सुनाएँ ।‘मैले काकालाई नाम काढेर बोलाएको तिम्रो हजुरबा, हजुरआमाले सुन्नुभयो भने के होला ?’, काकी अलमलिइन् ।
‘आ…म त बाबा नै भनेर बोलाउँछु, अरुले पनि त आफ्नो लोग्नेलाई बाबा, ड्याडी नै भन्छन्’ काकीले तर्क गरिन् ।
कन्चनपुरमा प्रहरीलेनै यसरि खन्न प्रयोग गरिने फरुवाले टाउकोमा प्रहार गरि श्रीमतीको निर्मम हत्या
चीनले बनायो अनौठो चश्मा : जुन लगाएपछि जस्तोसुकै भिडभाडमा पनि अपराधी सजिलै चिन्न सकिन्छ
दाइजोमा सिलिण्डर र चुल्हो नदिएको भन्दै महोत्तरीमा नव दुलही माथि भयो यस्तो घटना
पत्निले पतिको तस्विर पोष्ट गरेपछि सबैले ‘सुन्दरी पत्निका कुरुप पति’ कमेन्ट गरेपछि…